ङादी ग्रूप पावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ७ असोज २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी ङादी ग्रूप पावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ७ असोज २०७५)
नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले २०६२ साल फागुन ९ गते निजी कम्पनीको रूपमा ङादी ग्रूप पावर कम्पनी दर्ता भएको हो । निजी कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणको समेत जनसहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७१ साल जेठ २५ गतेदेखि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभव बटुलेका विभिन्न क्षेत्रका ९२ जना यस कम्पनीका संस्थापक शेयर सदस्य छन् । यस कम्पनीले लमजुङको भुलभुले तथा बाहुनडाँडास्थित सिउरी खोला आयोजनाबाट ५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यअनुरूप सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विद्युत् उत्पादनको अनुमति नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०६६ साल भदौ ३० गते प्राप्त गरेको हो । कम्पनीले ५ मेगावाट क्षमताको सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०६९ साल असोज ३० गतेदेखि विद्युत् उत्पादन तथा विक्री गर्न शुरू गरेको हो । यस आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत्शक्ति एकमुष्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरीद गर्न मञ्जुर गरी कम्पनी र प्राविधिकबीच २०६४ साल साउन १७ गते विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताअनुसार आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३० वर्ष कायम रहनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत साधारण शेयर र सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत साधारण शेयर वितरण गरिसकेको यस कम्पनीले असोज ४ गते पाँचौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले शेयरधनीका लागि १० प्रतिशत करबाहेक नगद लाभांशको प्रस्तावसहित ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने गतवर्षको पारित प्रस्तावलाई समेत पुनः पारित गरेको छ । साथै, एक महिला तथा स्वतन्त्र सञ्चालक लक्ष्मी शोभा गोसाईंसमेत रहने गरी संस्थापकतर्फ डा. भोगेन्द्रकुमार गुरागाईं, शैलेन्द्र गुरागाईं , दिनेश गुरुङ र रविन सुवेदी तथा सर्वसाधारणको तर्फबाट सत्यनारायण प्रजापति र शक्ति सिग्देल निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित सञ्चालकबाट डा. भोगेन्द्रकुमार गुरागाईं अध्यक्षमा चयन भएका छन् ।
आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा यस कम्पनीले रू. ५ करोड ८६ लाख ६८ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा आव २०७३/७४ को तुलनामा १४ दशमलव १६ प्रतिशत बढी हो ।
गत आवमा कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा करीब ९ प्रतिशत बढी रू. १२ करोड ९५ लाख १७ हजार सञ्चालन नाफा गरेको छ । यस अवधिमा विद्युत् विक्रीबाट अघिल्लो वर्षभन्दा शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत बढी रू. १४ करोड ४ लाख ३९ हजार आम्दानी गर्न सफल देखिएको छ ।
गत चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५३ करोड ५५ लाख ५४ हजार रहेको छ । अघिल्लो वर्षको नाफाबाट गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी चुक्तापूँजी बढाएको हो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १४ प्रतिशतले जगेडा कोष रकम वृद्धि गरी रू. ५ करोड ९८ लाख ९८ हजार पु¥याएको कम्पनीले गत चौथो त्रैमासमा रू. १५ करोड ३२ लाख ५० हजार लगानी गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६९ प्रतिशत बढी लगानी गरेको हो ।
गत चौथो त्रैमासमा कम्पनीको चालू सम्पत्ति रू. ७ करोड ९७ लाख २९ हजार र चालू दायित्व रू. ३ करोड ३६ लाख ८५ हजार रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू सम्पत्तिमा करीब ३६ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चालू दायित्व करीब ४१ प्रतिशत घटेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० दशमलव ९५, मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ८८ प्रतिशत, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ सय ८४ दशमलव ९७, तरलता अनुपात २ दशमलव ३७ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ११ दशमलव १८ रहेको छ । बिहीवारको शेयर कारोबारमा प्रतिशेयर अन्तिम मूल्य रू. १ सय ४८ कायम भएको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्री चापभन्दा खरीद चाप करीब २ गुणा बढी थियो । सो समयसम्म २ हजार २६ कित्ता शेयर खरीद र १ हजार १ सय १८ कित्ता विक्री गर्ने माग थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६६ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्यामर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिस ट्रेण्डमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । विश्वसनीयता भने न्यून रहेको छ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६६ दिनको कारोबार अवधिमा न्यूट्रल जोन (३९ दशमलव ९३ स्केल) मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६६ दिनको कारोबार अवधिमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव २० विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखीम हुन्छ भने लाभ पनि कम हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६६ दिनको कारोबार अवधिमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्य रेखाभन्दा तल छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ४८ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ सय ६५ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ४५ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
ङादी ग्रूप पावर : मैनबत्ती विश्लेषण (आइतवार, १७ भदौ २०७५)